Ungayifumana njani umkhondo weGPS kwimoto yakho ngamanqanaba ama-5 | I-Singapore ephezulu ye-GPS ye-GPS Tracker ye-Autism / ye-Autistic yabantwana kunye neDementia yabantu abadala
Siye sabona kwiimovie ezinje ngebhondi kaJames, i-mission engenakwenzeka kunye nesherlock, umntu uzama ukufaka i-bug emotweni ngokubeka i-tracker ye-GPS emotweni ukuze abe nolwazi lwesibini nolwesibini lomntu ekujoliswe kuye. Iikhawuntari zezithuthi ezifihliweyo zizixhobo ezincinci ezixhomekeke kwisimo seSYSTEM esimiselweyo (i-GPS) kunye nenethiwekhi yeselula ukugcina iithebhu kwindawo yokuma yemoto okanye ilori ngexesha langempela. Ngelixa zingezizo zonke trackers zeemoto zeGPS eyenzelwe ukuba ifihlwe, uninzi lincinci ngokwaneleyo ukuba bangahamba ngokungaqwalaselwa kwiliso elingafundiswanga nelingalunganga. Uninzi lwezi zixhobo lunokusetyenziswa ukugcina iliso malunga nokuhamba kwendawo nokuba umntu uphuma nini endlwini yakhe okanye apho aya khona. Ngoku usenokuba ucinga ngesiqu sakho, uza kwazi njani ukuba kukho umntu othule imoto yakho? Nanga amanyathelo amahlanu onokuyenza ukufumana umkhondo we-GPS kwimoto yakho.
Inyathelo 1: Khangela ngaphaya kweMoto
Eyona ndlela ifanelekileyo yokufumana i-tracker ye-GPS kwimoto yakho, kukuqalisa ngokujonga ngaphaya kwemoto njengokuqhuba ngaphantsi, amavili, ngaphakathi kwebhule kwaye ujonge uphahla. Isizathu sokujonga ingaphandle kuqala kungenxa yokuba umntu usenokuyibeka ngaphandle kwemoto xa upake imoto kwenye indawo. Kwaye ubukhulu becala ezi trackers zeGPS zinemagnethi ukuze ibekwe ngokulula ngaphantsi kwesisu, ngaphakathi bumper okanye nditsho eluphahleni.
Inyathelo 2: Khangela ingaphakathi lemoto
Kukho amathuba okuba umntu osondeleyo kuwe angafuna ukukuhlola kwaye akhangele imisebenzi yakho yemihla ngemihla ukuze akwazi ukubeka i-tracker ye-GPS ngaphakathi kuloo moto. Ke ngoko, inyathelo lesibini lokujonga ngaphakathi emotweni ngononophelo kwiindawo ezinje ngaphakathi kwephiko, idashboard, ngasemva emotweni, phantsi kwezihlalo kunye neekhaphethi. Unokujonga kwakhona izibuko ledatha kunye namabala anjengezibuko le-USB kunye nezinto. Ukuba kukho nayiphi na i-USB ejojileyo nokuba yeyakho, yikhuphe. Ukuba unenkqubo eshukumayo eshukumayo emotweni yakho okanye eyenzekelayo, yivule nje ngokukhetha ukhetho kwaye uzame ukukhangela ukuba kukho nasiphi na isixhobo esinqabileyo esiqhotyoshelwe ngaphakathi ngaphakathi. Yazi ukuba i-tracker ifakwe ngaphakathi kunokuba kuya kuba nzima ukuyibona ke qiniseka ukuba ujonge kakuhle kwaye ujonge nayiphi na iingcingo eziphuma ebhodini okanye kumgangatho wemoto yakho engakhange ivezwe ngaphambili.
Inyathelo 3: Thatha uNcedo lomntu
Ukuba awukwazi ukulandelela i-GPS Tracker ngaphakathi nangaphandle kwemoto lixesha lokuthatha uncedo komnye umntu. Sonke sinomhlobo ozicingela njengomphenyi, thabatha uncedo kubo ukulandelela umkhondo we-GPS. Ungasusa uncedo koomatshini bekhaya lakho kuba ngubani omnye onokuthi wazi ngcono malunga neemoto kunezoomatshini. Okokugqibela, unokuqesha ingcali kulo msebenzi ngokuqinisekileyo oya kuba luncedo.
Isinyathelo 4: Ukusebenzisa (SPY993) Ikhamera ye-GPS / ye-SPY ye-RF Dal Signal Detector:
Le yona yinto ekucetyiswa ukuba uyithenge ukuba ucacile ukuba umntu othile uthe watyala isixhobo sokulandela umkhondo kwimoto yakho okanye unokusebenzisa uhlobo oluthile lwekhamera ukurekhoda yonke into oyithethayo ngelixa uqhuba imoto yakho, I-SPY933 yi-compact GPS kunye nekhamera ye-SPY esebenza kakuhle njenge pro, inokusetyenziselwa ukufumana zonke i-intshi ezingaphakathi kwimoto yakho nangaphandle ngokunjalo, ngaphakathi kovavanyo olunye! Esi sithonga siza kunye nebhetri eyakhelweyo ye1500 MAH egcina isebenza kwaye iqinisekisa ukhuseleko lweNqanaba kuwe nakwimoto yakho bobabini ngaphandle kokwenza ukuba uhlaselwe kukuhlawuliswa kokuya ngalo lonke ixesha. Inokubona nasiphi na isantya esirhangqayo ngaphakathi kuluhlu lwe-1MHZ -i-8000MHZ iyenza ibe yeyona mveliso ithembekileyo phayaa apho umntu anokufumana ukuba enze ingqondo yakhe icace malunga nakuphi na ukuthandabuza ngetracker emotweni yakhe. Ayisiyiyo leya kuphela kodwa lo mbhemisi ukwindawo engenazingcingo enika ithuba lokungangeni ezandleni zakho okanye ukungcungcutheka kuninzi xa ujongisisa ukukhwela kwakho. Ngenxa yobungakanani bayo bokubumbana, unokuyigcina ijikeleze naphina emotweni yakho ukuyisebenzisa naphina xa uyifuna. Ngamafutshane, le yipakeji yokhuselo olupheleleyo esandleni sakho!
Inyathelo 5: Biza ii-Cops kunye neMilinganiselo yexesha elizayo:
Unokwenzeka kakhulu ukuba ulandela la manyathelo angasentla uyakufumana umkhondo we-GPS ukuba kukho umntu obeke imoto yakho. Okokuqala, ungachukumisi i-tracker ye-GPS inokuba iphethe iminwe yomrhanelwa. Okwesibini, fowunela amapolisa asekuhlaleni kwaye axele ngokwenzeke kuwe. Okokugqibela, kwixa elizayo ungayipaki imoto yakho kwindawo evulekileyo, zama ukujonga imoto yakho ngokwasemzimbeni mihla le okanye ungathenga umkhondo we-GPS oya kukunceda ixesha elide.
6199 Ubutyebi Bonke Imibukiso ye-31 Namhlanje